Koonfurta Sudan oo soo saartay sharci culeys ku ah ganacsatada Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Koonfurta Sudan oo soo saartay sharci culeys ku ah ganacsatada Soomaalida
Mareeg.com: Dowladda Koonfurta Sudan ayaa soo saartay sharci dhigaya in shirkadaha ganacsiga ajnabiga ah iyo hay’adaha caalamiga ah ee samafalka ayaa shaqaalahooda ugu sarreeya iyo kuwa hooseeya ka dhigaan dadka u dhashay dalkaas.
Sharcigaan ay soo saartay dowladda Koonfurta Sudan ayaa dhaqan geli doona bartamaha bisha soo socota ee October.
Wuxuu sharcigaan saameyn xoog leh ku yeelaan doonaa ajaanib fara badan oo ka ganacsada dalkaas, kuwaasoo ay ugu horreeyaan Kenyanka, Soomaalida, Itoobiyaanka iyo Eritrean-ka.
Dad badan oo Kenyan ah oo Koonfurta Sudan ku leh bankiyo ganacsi, halka Soomaalidu halkaas ku leeyihiin kaalimo shidaal, shirkado iibiya qalabka dhismaha, raashinka iyo qalab kale oo bagaash ah.
Sidoo kale, waxaa dalka Koonfurta Sudan ka shaqeeya kumanaan Eritrean ah, kuwaasoo leh booyado fara badan oo biyaha dhaamiya, maadaama dalkaas uusan inta badan laheyn qasabadaha biyaha lagu geliyo guryaha.
Dalka Koonfurta Sudan oo ah dal sabool ah, dhawaana ay ka dhaceen dagaalo sokeeye ayaa waxaa ka howlgala boqolaal hay’ado samafal ah, kuwaasoo iyagana sharcigaan saameyn ku yeelan doono.
Waxaa shaki badan laga muujinayaa sida ganacsatada ajnabiga ah iyo hay’adaha samafalku ay shaqadoodu ugu aamini karaan dad dhamaan u wada dhashay Koonfurta Sudan.